PCB Dhizaini-Shenzhen Sichi Technology Co., Ltd.
Kana iwe uine schematic kana kudhirowa, asi usina nguva kana maturusi ekupedzisa dhizaini, tinogona kukubatsira.
Pane 11 nhanho kune PCB dhizaini muitiro & basa kuyerera izvo isu kufukidza ari pcb kugadzira gwara.
Danho 1: Pedzisa Circuit Dhizaini yako
Danho 2: Sarudza PCB Dhizaini Software
Nhanho 3: Bata Schematic Yako
Danho rechina: Dhizaini Yechikamu Footprints - Kana iyo schematic yapedza nguva yayo yekukwevera chimiro chemuviri wega wega wezvikamu.Izvi zvinyorwa ndizvo zvinoiswa papcb mumhangura kubvumira zvikamu kuti zvitengeswe kune yakadhindwa wiring board.
Danho rechishanu: Gadzira PCB Outline - Chirongwa chega chega chichava nezvirambidzo zvine chekuita nebhodhi outline.Izvi zvinofanirwa kutsanangurwa mudanho iri sezvo pfungwa yekuverengwa kwechikamu nenzvimbo ichifanirwa kuzivikanwa.
Danho rechitanhatu: Setup Magadzirirwo Mitemo - With pcb rondedzero uye pcb tsoka akakwana, inguva kutanga placement.Before placement unofanira setup magadzirirwo mitemo nechokwadi kuti zvinoriumba kana maronda haana pedyo together.This muenzaniso mumwe chete sezvo pane pamwe mazana emitemo yakasiyana inogona kushandiswa kune pcb dhizaini.
Nhanho yechinomwe: Isa Zvikamu - Ikozvino inguva yekufambisa chimwe nechimwe chikamu pane pcb uye tanga basa rinonetesa rekuita kuti zvese izvo zvikamu zvikwane pamwechete.
Nhanho yechisere: Manual Route Traces - Zvinodikanwa kuti uendese maronda akakosha.Machiki.Simba.Sensitive analogi traces.Kana zvangopera unokwanisa kuzvishandura kuChinhanho chechipfumbamwe.
Nhanho 9: Kushandisa iyo Auto Router - Kune mashoma emitemo anozoda kuisirwa pakushandisa autorouter, asi kuita kudaro kunokuchengetedza maawa kana asiri mazuva ekutsvaga nzira.
Danho rechigumi: Run Design Rule Checker - Most pcb design software packages have a very good setup of design rule checkers.Its nyore kutyora pcb spacing mitemo uye izvi zvicharatidza kukanganisa kukuponesai kubva kuva respin ari pcb.
Danho 11: Output Gerber Files - Kamwe bhodhi iri kukanganisa kusununguka inguva yakabuda ari gerber mafaira.These mafaira vari universal uye zvinodiwa pcb machira edzimba kugadzira akadhindwa redunhu bhodhi.
Mushure mePCB Dhizaini, isu tinogona zvakare kutora dhizaini yako kune chokwadi nePCB yekugadzira uye PCB gungano masevhisi.
Icl7107 Voltmeter Pcb Layout Mitsubish Mcu Decryption Fpga Pcb Layout Pcb Dhizaini uye Gungano [Ic Reverse Engineering] Kondirakiti Pcb Gungano